यी कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिन्छन् महिलाहरू ! – Online Khabar 24
यी कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिन्छन् महिला
वैवाहिक स’म्बन्धमा खासगरी धोका दिने कुरालाई पु’रुषसँग नै जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर, वास्तविकता त्यो मात्रै होइन, पत्नीहरुले पनि पतिलाई धोका दिएका कैयन उदाहरण छन्।
म्यारिटल एण्ड फ्यामिली थेरापीद्वारा सन २०१२ मा गरिएको एक सर्भेक्षणमा पत्ता लागेको थियो कि २२ प्रतिशत विवाहित पुरु’षले आफ्नी पत्नीलाई धोका दिने गरेका छन्।
यो दर महिलातर्फ भने १४ प्रतिशत रहेको छ। यानिकी १४ प्रतिशत विवाहित महिलाले आफ्नो पतिलाई धोका दिने रहेछन्। सर्भेक्षणमा अर्को महत्वपूर्ण तथ्य के पनि पत्ता लाग्यो भने पु’रुषहरुका लागि धोका दिने प्रमुख कारण शा’रीरिक रहेछ भने, महिलामा भावनात्मक।
महिलाहरुले भावनात्मक सपोर्ट तथा मनसँगको निकटता महशुस नगर्दा आफ्नो पतिलाई छाडेर कोही अर्कैसँग स’म्बन्ध अघि बढाउने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो।
यतिमात्रै होइन, अन्य कैयन यस्ता कारणहरु पनि पत्ता लागेका थिए, जसकाकारण महिलाहरुले पुरुषलाई धोका दिइरहेका हुन्छन्। अध्ययनबाट पत्ता लागेका ६ कारण हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। जब महिलाहरुले आफ्नो पति वा प्रेमिबाट त्यो आफ्नोपन महसुस गर्दैनन्, जुन उनीहरुले चाहेका हुन्छन्।
यस्तो अवस्थामा उनीहरुको मनमा कुनै दोस्रो पुरुषले ठाउँ लिन थाल्छ। जसले उनलाई आफ्नो पति वा प्रेमीलाई धोका दिन प्रेरित गर्छ। मनमा बदलाको भावना उत्पन्न हुँदा पनि महिलाहरुले आफ्नो पा’र्टनरलाई धोका दिने गरेको पाइएको छ। यदि आफूले कुनै कुरामा धोका पाएको महसुस गरेमा उनीहरु पनि बदलास्वरुप धोका दिन प्रेरित हुन्छन्।
महिलाले आफ्नो पतिलाई धोका दिने अर्को महत्वपूर्ण कारण शा’रीरिक स’म्बन्धमा सन्तुष्ट नहुनु पनि हो। यस्तै यो पनि एक यु’वा , जस्को ठुलो घर थियो, हाँसी खुसी परिवार थियो, सुख, सु’विधा सबै थियो, परिपक्क उमेर भएकाले चारै तिर बाट बिहेको लागि कुरा आउँछ।
कुल घरानकी एक असल केटिसँग वि’बाह पनि हुन्छ, तर उ प्राय उदास रहिरहन्थ्यो, दिल खोलेर हाँस्ने रमाईलो गर्ने गर्दैनथ्यो, किनकि बाहिर बाट जे देखिन्थ्यो त्यो पूरा साँचो थिएन।
घर ठूलो भएर के गर्नु लाखौं ऋ’णमा डुबेको थियो, त्यस माथी बि’हेको ख’र्च ले थपिएको रिणको ब्या’ज समेत तिर्न धौ धौ भयो। समय बित्दै गयो, छोरो जन्मियो, हुर्कँदै गयो। कहिल्यै खाली नबसि परिश्रम गरेर कमाएको पैसाले अब घर चलाउन गार्हो भयो, ऋ’णको सावाँ घटाउने त कुरै छोडौं। यी सबै कुराहरुको पीडा आफ्नो ठाउँमा थिए, उस्ले श्रीमतीको लागि बि’हेमा किनेका ग’हनाहरु समेत नक्कली थिए ।
कुनैदिन उनले थाहा पाईन भने के हुन्छ होला भन्ने पिडाले पनि सताउथ्यो उसलाई। घरको समस्या कसैसँग सेयर कहिलेपनि गर्दैनथ्यो । एक दिन सुन्दर भबिस्य बनाउनुपर्छ भनेर श्रीमती अनि परिवारलाई मनाएर विदेश लाग्छ । दिन, महिना हुँदै केही बर्ष बित्छ । घरमा ख’र्चको लागि मात्रै पैसा पठाउथ्यो, बाँकी पैसा ऋ’ण लिएकाहरुलाई नै पठाउने गर्थ्यो।
घरमा भने बैंकमा पैसा जम्मा गरेको छु, आएपछी केहि गर्नुपर्छ भनेर ढाँट्नेगर्थ्यो। जब ऋ’ण तिरेर भ्याउँछ अनि घर फ’र्कन्छ। एकदिन अचानक छोरो सिँढी बाट लड्न पुग्छ , हतार हतार ए’म्बुलेन्समा हस्पिटल लैजान्छन, डाक्टरले निक्कै पैसा लाग्ने कुरा बताएपछी उसको सा’त्तो जान्छ, आजसम्म न उ सँग बैंकमा पैसा छ न त कुनै कुरा बेचेर पैसा आउने कुरा नै छ।
श्रीमतीले बैंक गएर पैसा निकालम भनेर हतार हतार श्रीमानलाई तानेर लान्छिन बिचरा उ केइ बोल्न सक्ने अवस्थामा नै छैन, उ कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा पनि तेत्ती मेसो पाईराको हुन्न । जब बैंक पुग्छ उ छक्क पर्छ। श्रीमतिले एटिएम बाट पैसा निकाल्छिन। उ हेरेको हेरै हुन्छ, ह’स्पिटल पुगेर पैसा बुझाउछिन, सबै जना चिन्तित भइरहेको अवस्थामा एकैछिन पछि भित्रबाट डाक्टर आउँछन् ।
अनि बाबुमा निक्कै सुधार भएको र कुनै पनि ख`तरा नभएको कुरा सुनिसकेपछि सबै खुसी हुन्छन । अनि श्रीमतिले भन्छिन “हजुरको पीडा मैले बुझेको छु ,यो हजुरले नै पठानुभएको पैसा हो, मैले घरमा बस्दा मेसिन चलायर,फु’र्सदमा अरुको मेला गएर तथा आईपरेका काम हरु गरेर अलिअली कमाउँथे।
त्यसैले घर खर्च चल्थ्यो, हजुरले पठाएरको सबै पैसा मैले बैंकमा खाता खोलेर ज’म्मा गर्थें , हजुरले नभने पनि घरको अव’स्था मलाई राम्रो सँग थाहा थियो । अनि यो ग’हना न’क्काली हो भन्ने पनि थाहा छ मलाई, हजुरलाई मैले नभनेको मात्रै हो , मेरो लागि सुन बहु’मुल्य होइन , जुन दिन हामी एक भएका थियौं,।
अ”ग्नि अनि हाम्रा सबै आफ्ना हरुलाई सा’क्षी राखेर हरेक सुख दुखमा साथ दिने भनेर कसम खाएका थियौं । त्यो दिन हजुर बाट पाएको यो उपहार चाहे जे सुकैले बनेको होस् । मेरो लागि हिरा मोति भन्दा कम छैन । उ केही बोल्न सक्दैन, एक टक लाएर श्रीमतिलाई हेरेर आँशु बगाईरहन्छ । श्रीमतीले आमाले झैं उस्लाई अँ’गालोमा बेर्छिन।
आज स’म्मको उसको पीडा सबै एकैपलमा हराएको महसुस गर्छ। एक दुई दिनमा बाबुलाई पनि ठिक हुन्छ अनि अब चाहे जे होस, सुख दुख सबै मिलेर संगै सहने , जे छ त्यसमै रमाउने बिचार लिएर अब कैले पनि न’छुट्टिने, कैले बिदेश नजाने अठोट लिन्छन र खुसी साथ जीवन बिताउँछन। फेसबुक बाट साभार ।
Prevछोरालाई गाडी ल्याईदिन्छु मामुलाई दुख नदिनु है भन्दै मलेसिया गएका बिबेक बाकसमा फर्किए, हेर्नुस् त्यो दृश्य !
next४० लाख जनसङ्ख्या भएकाे सहरमा फेरि लकडाउन ! कारण निकै डरलाग्दो ।